Iyadoo koorsadan waad ku dhaqmi doontaa :
• ahdhagayso iyada oo loo marayo muuqaallo iyo waraaqo maqal ah;
• ah reading oo wata maqaallo iyo dukumeenti maamul iyo nolol maalmeed;
• ah qoraal qoraal ah oo leh maadooyin kala duwan oo qosol leh;
• ah naxwaha iyo qaamuuska mahadsanid fiidiyowyada si ay u fahmaan, iyo waxqabadyada isdhexgalka si ay kuu tababaraan.
Waxaad koorsada u dhex mari kartaa si xor ah oo waxaad dooran kartaa inaad ka shaqeyso taxanaha iyo hawlaha adiga aadka u xiiseeya marka hore.
Si fudud oo hufan wax uga baro taleefankaaga gacanta, tablet-kaaga ama kumbuyuutarka.
Ku noolaanshaha Faransiiska - B1 Diisambar 9, 2021Tranquillus
READ Taariikhda matalaadda iyo daaweynta waallida
horeKu noolaanshaha Faransiiska - A2
socdaKu noolaanshaha Faransiiska - A1
Heshiiska shaqada ee dhalinyarada: tilmaamaha isticmaalka